Hordhac: Barcelona v Juventus – Bluagrana Ma Sameyn Doontaa Soo Laabasho Kale Oo Mucjiso Ah Xilli Juventus Ay Hal Lug Kula Jirto Semi-finalka Champions League? - Laacib.net
Hordhac: Barcelona v Juventus – Bluagrana Ma Sameyn Doontaa Soo Laabasho Kale Oo Mucjiso Ah Xilli Juventus Ay Hal Lug Kula Jirto Semi-finalka Champions League?
Kulanka: Barcelona v Juventus
Lugtii hore: Juve 3-0 Barca
Kooxda Talyaaniga ee Juventus ayaa hal lug kula jirta semi-finalka Champions League ka dib markii ay 3-0 ku soo xaaqday lugtii hore ee wareega 8da kooxda Barcelona kulankii ka dhacay Juventus Stadium.
Barcelona oo wareega 8da u soo gudubtay ka dib markii ay soo laabasho rikoor ah ka sameysay guuldaradii 4-0 ee ka soo gaartay PSG ayaa mar kale isku dayi doonta caawa inay soo laabasho kale oo lama filaan ah sameyso laakiin waxaa hortaala howl culus madaama Juve ay aad uga duwan tahay kooxda Faransiiska.
Kooxda Catalans ayaase niyada ku dhisanaya in 15 kulan oo isku xigta oo tartamada Yurub ah ay ku badiyeen garoonkooda.
Barcelona waxa ay u baahan tahay inay dhaliso seddex gool oo bilaa jawaab si ay u barbareeyaan Juve. Waana xisaab aan laga baxsan karin. Laakiin su’aasha is weydiinta leh ayaa ah Barcelona ma awoodi doontaa in soo laabasho kale oo mucjiso ah ay sameyso markii labaad waqti gaaban gudaheed, gaar ahaan iyagoo la ciyaaraya kooxda heysata horyaalka adag ee Serie A?
Kooxda Barcelona waxaa ka maqan kulanka caawa xiddigaha Rafinha iyo Aleix Vidal oo dhaawacyo jilibka iyo canqowga qaba. Sidoo kale waxaa shaki ku jiraa taam ahaanshahooda xiddigaha kala ah Arda Turan, Mascherano iyo Mathieu.
Dhanka kooxda Juventus waxaa dhaawac jilibka ah kaga maqan Pjaca, halka Paulo Dybala uu taam u yahay inuu ku soo bilowdo kulanka caawa.
Haddii Barcelona ay mar kale sameyso lama filaanka oo ay u soo gudubto semi-finalka waxaa halis ugu jira inay seegaan lugta hore xiddigaha kala ah Neymar, Pique, Rakitic iyo Suarez oo hal jaale u jira inay ganaax la kulmaan.
Dhanka kooxda Juventus oo haatan hal lug kula jirta semi-finalka waxaa hal jaale u jira inay seegaan lugta hore ee wareega afar dhamaadka xiddigaha kala ah Cuadrado, Mandzukic iyo Sami Khedira.